USA काे ग्रीनकार्ड हाेल्डर इन्जिनियरलाई विवाहका लागि नर्स चाहियाे समाज - News 88 Post
USA काे ग्रीनकार्ड हाेल्डर इन्जिनियरलाई विवाहका लागि नर्स चाहियाे समाज
May 9, 2021 September 24, 2021 N88LeaveaComment on USA काे ग्रीनकार्ड हाेल्डर इन्जिनियरलाई विवाहका लागि नर्स चाहियाे समाज
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा विवाहका लागि विज्ञापन गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको । हरेक माध्यमबाट मान्छेहरु आफ्नो जीवनसाथी खोज्दैछन् । यो बीचमा कान्तिपुर दैनिकमा विवाह सम्बन्धी धेरै सूचनाहरु प्रकाशित भएका छन् ।
USA काे ग्रीनकार्ड हाेल्डर इन्जिनियर विवाहका नर्सकाे खाेजीमा रहेकाे विज्ञापन छ । मन परेकाे चित्त बुझ्दाे सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । अमेरिकाकाे ग्रीनकार्ड हाेल्डर इन्जिनियरलाइ पनि किन छाेरी कसैले दिएनन्
यसरी कान्तिपुर दैनिकमा विज्ञापन छाप्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयाे उसैसँग बुझाैँ । उनलाइ ९८०३७४३०८१ मा फाेन गरेर सम्पर्क् गर्न सक्नुहुन्छ । विज्ञापनमा उल्लेख नम्बर यही हाे ।
डीग्री पढेकाे क्षेत्री पुरूष विवाहका लागि केटीकाे खाेजीमा छन् । उनी विदुर हुन् दाेस्राे विवाह गर्ने सुर कसेका उनले कान्तिपुर दैनिकमा विज्ञापन छापेका छन् । इच्छुकले ९८४७३७६७८० मा फाेन गर्न सक्नुहुन्छ ।
अधवैशे वरलाइ खानदानी बधु चाहिएकाे पनि विज्ञापन छ है । ८९८४११७७३१८ फाेन गर्न सक्नुहुन्छ । याे सबै कान्तिपुर दैनिककाे वर्गीकृत डिस्प्लेमा प्रकाशित विज्ञापन हाे ।
विवाहकाे लागि सम्बन्ध विच्छेद भएका वा एकल अधवैशे महिलाले ९८१०१९८७९८ नम्बरमा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
उपचार खर्च तिर्न नसक्ने कोभिडका बिरामीको सबै खर्चको जिम्मेवारी अब हाम्रो हुनेछः रबि लामिछाने
यी मेयरले आफ्नो कार्यालयका सबै गाडी एम्बुलेन्स बनाए, भन्छन् ‘जनता बाँचे न राजनीति गर्ने हो’
यसरी मिल्यो मन्त्रालयको भागबण्डा, कसलाई कुन ?
September 20, 2021 N88
ओली सरकारले ल्याएको खोप देउवा सरकारले व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेन
July 30, 2021 N88
यी ३ मालदार मन्त्रालय माओवादीलाई देउवा र प्रचण्डबीच सहमति, को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
October 6, 2021 N88